SIR LAGA HELAY SHIRQOOLADII QALBI DHAGAX LOOGU DHIGAY KISMAAYO, BELEDWEYNE, GALGADUUD & MUQDISHO. | Kala soco warar Xul ah
SIR LAGA HELAY SHIRQOOLADII QALBI DHAGAX LOOGU DHIGAY KISMAAYO, BELEDWEYNE, GALGADUUD & MUQDISHO.
C/kariim Sheekh Muuse “Qalbi-dhagax” Waa nin ku dhashay kuna soo barbaaray Magaalada Muqdisho wuxuu Waxbarashadiisa Dugsi hoose, dhexe iyo Sare ku qaatay Magaalada Muqdisho
“Qalbi-dhagax” waa Muwaadin Soomaaliyeed, waxaana uu ka mid ahaa Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya, Isagoona qeyb weyn ka qaatay Dagaalkii Xoreynta Dhulka Soomaali Galbeed ee 1977 Dhex maray Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Itoobiya.
C/kariim Sheekh Muuse Qalbi-dhagax ayaa intii uu ku jiray Ciidamada Xoogga Jamhuuriyadda Soomaaliya Ka Gaaray Sarkaal.
Qalbi-dhagax ayaa Dhaawac culus ka soo gaaray Dagaalkii 1977-dii dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya, isagoona sidoo kale dagaalkaas ku waayay Walaalkiis ka weyn.
Markii ay burburtay Dowladii Maxamed Siyaad Barre, wuxuu go’aansaday inuu la dagaalamo Itoobiya, isagoona ka mid noqday Saraakiisha Hormuudka u ah Jabhada ONLF, oo dooneysa inay soo celiso Dhulka Soomaali Galbeed oo Itoobiya ay si xoog ah ku heysato.
Muddo dheer uu waday Halgankaasi, ugu dambeyn waxaa ku xoogeystay Xanuunka Macaanka uu qabay, wuxuuna go’aansaday inuu ka soot ago Jabhada ONLF, isagoona caafimaad iyo degenaasho u soo raadsaday Magaalooyinka waa weyn ee dalka.
Hadaba Qalni dhagax wuxuu la kulmay Shirqoolo kala duwan oo inta badan la doonayay in lagu dilo, waxaana arintaasi Baaris iyo xaqiiqo raadin u gashay Warbaahinta.
Dowlada Itoobiya ayaa si ba’an u raadineysay Cabdi Kariim oo ay ka war heshay inuu soo galay gudaha Soomaaliya, waxaana la soo daba dhigay Basaasiin Itoobiyaan iyo Soomaali isugu jira, Falkii ugu horeeyay ee lagu qaarijin rabay isagoo jooga Magaalooyinka waa weyn ee Soomaaliya, wuxuu dhacay Horaantii 2011, markaas uu ku sugnaa Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Sirdoonka Itoobiya ayaa ka war helay inuu ku sugan Qalbi Dhagax Kismaayo, waxaana loo soo diray Saraakiil Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jiray, iyagoo doonayay in ay aragti ku toogtaan, hadana wuu ka baxsaday maadaama uu yahay Sarkaal xeelad badan yaqaana.
Raga si gaara ula shaqeynayay maadaama uu la xanuunsanayay Xanuunka Macaanka ayaa ku taliyay in xogtiisa aan la heli Karin haduu tago Magaalada Beledweyn ee Xarunya Gobolka Hiiraan, halkaas uu ku sugnaa intii 2011-2012, sida ay noo xaqiijiyeen Ehelkiisa Wuxuu Beledweyn kula kulmay 3-Shirqool, iyadoo mid ka mid ah uusan ku dhicin ka dib wuu isaga soo tagay Gobolka Hiiraan.
Halgamaa Qalbi Dhagax sanadkii 2013, wuxuu u soo cararay magaalada Muqdisho, isagoo si dhuumaaleysi ah ku soo galay, muddo kooban uu ku sugnaa Sirdoonka Itoobiya oo ayaa mar kale helay Aqbaarta Cabdi kariim, maadaama ay la shaqeynayeen Saraakiil Soomaali ah, iyadoo awooda Sirdoonka Itoobiyana ay tahay mid aad u sareysa, mar kale maxaa dhacay?
Qorshaha markaan wuxuu ahaa in la afduubo si loo geeyo dhulka Itoobiya, halkaas oo maxkamad lagu saarayo, waxaana ujeedada qorshahaas loo dagay ay aheyd in lagu cabsi galiyo saraakiisha kale ee hor boodeysa Jabhada ONLF.
Cabdi Kariim oo isaga qudhiisa ay la shaqeynayeen Saraakiil Soomaali ah oo si weyn u neceb Itoobiya kuwaas oo ku kala sugan Deegaanada Soomaali galbeed ilaa iyo Koonfurta Soomaaliya ayaa mar kale ka war helay Dhagarta iyo Shirqoolka Dowlada Itoobiya, waxaana uu ka tagay goobtii uu Muqdisho kaga sugnaa xilli habeen ah waqti dambe, isagoo aan ka bixin magaalada balse u guuray goob kale.
Baaritaan iyo shaqada Basaasiinta Itoobiya oo sii xoogeysatay, waxaana la soo ogaaday halka uu Muqdisho kaga dhuumanayo, waxaana qorshaha markaan uu ahaa sida ay inoo sheegeen Saraakiil Soomaaliyeed in la dilo Cabdi Kariim Qabi dhagax.
Weerarkaan wuxuu soo gaba gabeeyay Mudadii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho, wuxuuna ka baxsaday ciidamo loo soo diray in ay dilaan, ka dib wuxuu ku laabtay Magaalada Beledweyne Sanadkii 2014 halkaas uu ku sugnaa Labo todobaad oo kaliya, markaan Sirdoonka Itoobiya waxay u adeegsadeen dilka Qalbi dhagax markey ogaadaan inuu joogo Beledweyne Maamulka Gobolka Hiiraan ee Dowlada Soomaaliya, oo si weyn ula shaqeynayay Itoobiya, wuu ka baxsaday dhagartii Masuuliyiinta Gobolka Hiiraan, Safar dhulka ah ayuu ku tagay deegaano ka mid ah Gobolka Galgaduud.
Itoobiya oo diyaar u aheyd inay ku bixiso lacag kasta oo suura galin karta in la dilo Qalb Dhagax ayaa hadana Dhowr bilood uu ku sugnaa Galgaduud, isku day inay disho laakiin uma suura galin.
Diyaarad ayuu ka soo raacay Magaalada Gaalkacyo sanadkii 2015, wuxuuna ku soo laabtay Magaalada Muqdisho, Cabsi iyo walwal ayuu ku joogay Muqdisho tan iyo markaas sida ay sheegeen qaar ka mid ehelkiisa.
Mid ka mida Saraakiisha Xogtaan nala wadaagay ayaa sheegay in dhowr jeer uu la kulmay Qalbi Dhagax uu u sheegi jiray inuu ka baqanayo Wasiir ka tirsanaa Dowladii Xasan Sheekh Maxamuud, inkastoo Sarkaalkaasi uu diiday inuu sheego Magaca wasiirkiisi laakiin wuxuu xusay inuu hada Xildhibaan yahay.
Dhamaadkii Sanadkii 2015, Kulan ka dhacay xarunta Xalane, waxaa isugu yeeray Wasiiro iyo Saraakiil sar sare General Gabre, wuxuuna u sheegay in Qalbi dhagax oo Dowlada Itoobiya sida uu yiri Dambiyo badan ka galay uu ku dhuumaaleysano Magaalada Muqdisho, wuxuu u sheegay in la siin doono lacago badan cid kasta oo suurta galisa in la qabto ninkaasi.
Markaasi ka dib Ciidamada nabad sugida Soomaaliya ayaa si weyn u baadi goobayay Qalbi Dhagax, waxaana isbedel kasta o ku dhacayay Taliyeyaasha Nabad Sugida ay Itoobiya isku dayaysay mid kasta inay ku qasabto inuu diirada saaro Raadinta Cabdi kariim.
Maxaa suura galiyay in la qabto Qalbi-dhagax?
Halgamaa Cabdi kariim wuxuu dhawaan ka tagay magaalada Muqdisho isagoo u ambabaxay Gaalkacyo, halkaas oo ay ku sugnaayeen ehelkiisa uu doonayay inuu la soo kulmo iyo Saraakiil Jabhada ONLF oo shir gaara uu kala yeelan rabay Halganka socda.
Ciidamada Nabad sugida Galmudug ayaa gacanta ku dhigay Qalbi dhagax ka dib markii ay ka shakiyeen, waxaana Xabdiga uu kaga jiray Magaalada Gaalkacyo ku booqday Odayaal deegaanka oo si weyn u yaqaanaan, ka dib Galmudug waxay balanqaaday inay soo deyn doonto, laakiin mid ka mid ah saraakiisha Nabad Sugida Galmudug ayaa la wadaagay inay gacanta ku hayaan Nin lagu magacaabo Qalbi dhagax, waxaana durba soo baxay amar ah in Nabad sugida Muqdisho lagu soo wareejiyo Cabdi Kariim.
Diyaarad gaar ah ayaa looga soo qaaday magaalada Gaalkacyo, waxaana la keenay Muqdisho, iyadoo lala kulansiiyay Saraakiil Saraakiil Itoobiyaan ah sin ay u xaqiijiyaan ka dib waxaa la qaaday Magaalada Baydhabo, halkaas oo laga saaray diyaarad geysay Magaalada Adis ababa ee dalka Itoobiya.
Dowlada Soomaaliya ayaa waji gabax kala kulantay in ay u gacan galiso Itoobiya, Halgamaa Soomaaliyeed, waxaana baraha Bulshada ka socda Kacdoon looga soo horjeedo dowlada Madaxweyne Farmaajo oo kalsooni badan oo shacabka ah ku weysay arinta Qalbi Dhagax.